Qaar ka mid ah Xisbiyada Norwey oo garab istaagay qoyskii Soomaalida ee dhawaan guriga qasabka looga saaray. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Qaar ka mid ah Xisbiyada Norwey oo garab istaagay qoyskii Soomaalida ee...
Qaar ka mid ah Xisbiyada Norwey oo garab istaagay qoyskii Soomaalida ee dhawaan guriga qasabka looga saaray.
Oslo:- Xisbiyada Venstre iyo Rødt oo ka mid ah axsaabta siyaadda kuwooda ugu waaweyn ayaa ku dhaliilay maamulka dowladda hoose ee magaalada Olso sidii ay ula dhaqmeen qoyska soomaalida ee dhawaan guri ay deganaayeen qasabka looga saaray.
Xisbiyadaani ayaa ugu baaqay golaha deegaanka ee magaalada Oslo in ay ka laabtaan go,aanka ay guriga uga saareen qoyska Maxamed Jaamac oo degana xaafadda Tøyen ee magaaladaasi kana kooban 5 caruur, aabe iyo hooyadood.
Rina Marian Hansen oo ka tirsan Xibiga AP kana mid ah xubnaha bulshada deegaanka Oslo ee arintaani sida weyn looga dhaliilay ayaa sharaxday in mudo xileedka guriga ay deganaayeen qosykaani ku ekeyd 20-kii febraayo ee sanadkii hore balse cabasho ay ka gudbiyeen arintaasi diidmo laga siiyay sidaasi darteedna looga saaray guriga.
Waxa ay keentay in maamulka Oslo dhaliil xoogan kula kulmo in ay banaanka dhigaan qoyskaani oo heysta Shanta caruurta ah oo kala dhigta dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee wadankaan, xili bartamaha looga jiro faafista cudurka covid19, iyadoo arintaasi maamulku uu u isticmaalay boolis fara badan oo hubeysan.
“ In aad si arxan daro ah ugu saarto wadooyinka banaanka qoys ka kooban 7 qof iyadoo cimilada qabowga ay ka hooseyso -15 heerka qabowga, maahan dhaqan wanaagsan oo ay sameeyeen maamulka Oslo “ ayuu yiri hogaamiyaha xisbiga Venstre ee Oslo Hallstein Bjercke xili oo l ahadlayay TV2.
Malinta arbacada ee soo socota waxaa la qaban doona kulan ay yeelanayaan golaha deegaanka Oslo oo dhowr xisbi ka kooban, waxaana kulankaasi looga doodaya soo jeedino lagu dalbanayo in la bedelo sharciyada ku dhiiragelisay arintaani maamullka Oslo kaasoo oo ay hor boodayaan xisbiyada Rødt iyo Venstre oo is garab taagan.
Waxaa la sheegaya in go,aankii looga saaray guriga qoyska Maxamed Jaamac ee kuyaala Hagegata 31, Tøyen uu noqon karo mid la hakiyay haatan kadib markii maayarka u gaarka ah arintaani laga dalbaday in uu dib u eegis ku sameeyo.
“Kiiskani waa tusaale xun oo muujinaya sida dadka degan guryaha dawlada hoose ay ugu xanibanyihiin dabin faqri, xalka aan u qalmin waa in si deg deg ah loo joojiyaa, waxaana rajeyneynaa in dhamaan golaha magaalada ar arintaasi xal ka gaari doonaan arbacada” ayay tiri hogaamiyaha xisbiga Rødt ee Oslo Eivor Evenrud oo u warameysay TV2.
Xisbiyadaani ayaa ku dhaliilay Rina Marian Hansen oo hogaamineysay goaha deegaanka ee xaafadda Tøyen ee talabadaani qaaday in aysan sameyn talaabo kale oo xal noqon kartay si looga baaqsado in qoyska guriga looga saaro, waxana sidoo kale arintaasi ay sababtay cambaareyn badan oo buslahda kaga timid.
Qoyskaani ayaa markii guriga qasabka looga saaray waxaa wareysiyo la yeeshay warbaahinta Norwey gaar ahaan TV2 oo ahaa kanaalkii sida rasmiga ah u soo baahiyay dhibaatada qabsatay familkaani, waxaana taasi ay keentay in bulshada Norwey u u kacaan kadibna ay u ariiriyaan dhaqaale farabadan oo haatan gaaraya 1.5 Milyan oo karoon taas oo u dhiganta 150,000 kun oo doolar.
Previous articleSomalia, UN seek over $1bn for humanitarian assistance.
Next articleHooyo Soomaaliyeed oo horay 8 caruur ah looga qaatay oo sheegtay in ay maxkad dalban doonto ( Dhageyso)